Dhuumaha Iibinta ee B2B: Furashooyin u rogay Macaamiil | Martech Zone
Waa maxay a dhuumaha iibka? Labada ganacsi ee ganacsi (B2B) iyo ganacsiga macaamilka (B2C) adduunka, ururada iibka waxay ka shaqeeyaan sidii loo qiyaasi lahaa tirada hogaamiyaasha ay hada isku dayayaan inay u badalaan macaamiisha. Tani waxay siisaa iyaga saadaal ah inay gaarayaan yoolalka ururka maaddaama ay ku saabsan tahay tirinta iyo qiimeynta. Waxay sidoo kale siisaa waaxaha suuqgeynta dareen deg-deg ah oo ku saabsan haddii ay wadaan iyo in kale inay ku kaxeynayaan booqdayaal ku filan hogaaminta.
Shirkado badan oo B2B ah oo ka shaqeeya aagga warshadaha waxay leeyihiin wareegyo iibsi oo dheeri ah. Marka, sidee ku ogaaneysaa goorta rasaasta ay diyaar u tahay inay iibsato? Nidaamka Bixinta Iibsiga ee ActiveConversion wuxuu ku tusinayaa sida saxda ah ee aad u isticmaali karto otomaatiga suuq geynta si aad ugu rogto booqdayaasha degellada macaamiil. Raac tallaabo-tallaabo hoos u dhuumaha si aad u aragto sida aad ku ogaan karto halka ay horseedyadu ka yimaadeen iyo goorta ay iibka diyaar yihiin Qalabaynta nidaamka waxay kuu oggolaaneysaa inaad diirada saarto waxa ugu muhiimsan - abuurista iibka!
Muuqaalka safarka ee hogaaminaya waxay marayaan dhuumaha iibka (iyo cabirida marxalad kasta) waa layli aad wax ku ool u ah shirkadaha si ay u maraan waana tan muuqaal qurux badan oo sidaas sameeya Qalabaynta suuqgeynta casriga ah iyo aaladaha maaraynta nolosha ayaa bixiya noocyada fikradaha oo xitaa waxay dhalin karaan suurtagalnimada in hoggaanku u sii socdo heerka xiga.
Beddelka Active waxay kaa caawineysaa inaad qiimeyso marxaladdaada hogaamineed ee wareegga iibsiga si aad u hagaajiso dadaallada iibka iyo sidoo kale sida dadaalladaada suuqgeynta ay u bixinayaan.
Tags: beddelaad firfircoonbeddelaad firfircoondhuumaha b2bdhuumaha iibka b2bhubkaaku dhowxir iibintaxog.comqaraxyada emaylkaEmail Marketingraadad kululcadee shirkadahacadee shirkadagartaan tilmaamahashaqada loo dhiiboaqoonsiga hogaamintadhibcaha hogaankaLinkedInxayeysiiska khadka tooska ahbuugga internetkaphonebandhigyadacilmiotomaatiga iibkadhuumaha iibkamatoorada searchaqoonsiga martidaWebinars